Thierry Baudet Forum for Democracy (FvD) "Makava eMinerva anoparadzira mapapiro ayo": Martin Vrijland
Thierry Baudet Forum for Democracy (FvD) "Chikora cheMinerva chinoparadzira mapapiro ayo"
Akaiswa mukati NEWS ANALYZES	by Martin Vrijland	musi wa 21 March 2019	• 34 Comments
Mukutanga kwekutaura kwake kukunda kubva usiku hwekupedzisira, Thierry Baudet akati usiku hwekupedzisira:Hondo ye Minerva inoparadzira mapapiro ayo usiku". Hurukuro yebombastic yakawana zvakawanda panguva ino kutarira uye kutsoropodza, asi vashomanana vangave vanoona pasi pasi kaviri mumutauro uyu wezvakakosha. Icho chinoreva chaicho cheMinerva owl chakataurwa naBaudet ndeichi: chiziva chekuti Freemasons dzinonamata; Moloch. Zvipfeko (skull uye mapfupa, sangano reTüle, nezvimwewo) rakaparadzira mapapiro awo kumativi ose eNetherlands.
Mutambo weHegelian dialectics unobuda pamberi pako. Mashoko akavanzika ndeokuti boka reLeiden Minerva rinotungamirira. Baudet, muzukuru wemambo Clingendael musangano, inoratidza zvayo chaiye yakavanzwa pachena. Vakashambadza vanachiremba veClingendael vakaisa hurumende yavo yekudzingisa pawn mu sham democracy umo kushorwa kunogona kuputira kuruboshwe-kurudyi kumunda kusvika kune zvikomo zvakakwirira. (verenga zvakare pasi pevhidhiyo)
Thierry Baudet anokwanisa kutumidza zvinhu zvose izvo zvakanyanya kuongororwa kwezvinhu zvakaratidza kuti pane kurarama pakati pevanhu. Anogona kukurudzira, nokuti iyo yose kuEurope uye kumadokero kwayo inofanira kukura. Ndiyo Hegelian kubudirira mafomu mune optima forma. Rurimi rwemashoko maviri anopesana anowedzera ikozvino: kupesana kunotungamirira kune zvakada kufanana, kunyange muzivi weHegel. Uye ichi ndicho chikonzero Baudet anogona kudana Mark Rutte mari isina maturo:
"Tinopesvedzwa nemayunivhesiti, vatapi venhau, vanhu vanogamuchira zvipo zvedu zvekugadzira uye vanogadzira zvivakwa zvedu, uye pamusoro pezvose zvatinotapudzwa nevatongi vedu. Chikamu chevachengeti vakawira pasi; mapurogiramu emasangano; vanhu vasina kumboverenga bhuku muhupenyu hwavo uye havana ruzivo kuti zvinhu zvinokosha ndezvipi munguva refu. Zvinosuruvarisa, ivo vanotonga masangano ekugadzirisa mazano enyika yedu uye vanoita zvisarudzo zvisina kunaka nguva nenguva zvakare mukusanganiswa kwekusaziva nekunyengera kwezvido. "
Kwete kwenguva refu! Uye saka yakaenderera mberi, uye saka vanhu vanowana kunyengera kuti musasa werudyi wakakunda uye unokonzera kuchinja kukuru.
Tinoziva izvi zvichikwira kubva kurudyi kubva kune dzimwe nyika dzeEurope uye kunyange neU.S., uko Donald Trump inogonawo kuwanikwa pasi pemusasa iwoyo. Tinozviziva kubva kuBraxit musasa. Tinozviziva kubva kuItaly uye kune dzimwe nyika dzeEurope. Matanda ebheteri akaiswa kumusoro. Kunyange zvakadaro, iri kugadzirira kwekushandiswa kwekambani, iyo kodzero ichave yakabatanidzwa nedambudziko rezvemari uye rehupfumi rinotarisira kuWest.
Kukundikana kweBrexit kwandakagara ndagara ndafanotaura uye kuwira kweAmerican economic soon will be linked to this (opposed controlled) in critical right-wing group. Izvozvi naizvozvo nokugadzira kuti kodzero iyi inogona kukunda ikozvino, nokuti inobatsira kudiwa kwekutsvaga kubva kune mhirizhonga uye ipapo 'chirongwa chitsva' chichagadzirwa. Sangano rinopesana nevekudyidzana kwepasi rese uye rinopesana neE-right-wing cabal richabatanidzwa kune dambudziko iri rezvemari uye kuparadzanisa munguva inotevera. Mhirizhonga iyo ichaita inopa simba rekudzivirira simba kwehutsva hutsva. Izvi zvinopa simba rekudzivirira kwe (uye zvakare-yakafanotaurwa kare pano) kutora kweEU neTurkey uye yekuwanazve hutongi hweOttoman. Ichatotungamirirawo kune kugadzirisa kwekupedzisira nevanofunga zvakanyanya; nokuvatumidza kuti vanofunga mano. Sezvo avo vanotungamirira mhirizhonga, chero nzira ipi neipi yekutsoropodza ichanyatsorambidzwa kurambidzwa uye kune chokwadi che 1 chete uye icho ndicho chokwadi icho ruoko rune simba ruchaita.
Thierry anokwanisa kupa mhosva kuenderera mberi uye anogona Utrecht kurwisa PsyOp kutamba pamafungiro. Uyewo mune izvozvi tinoziva chiso chechokwadi cheMasonic pawn (Minerva Clingendael muzukuru) Baudet. Uye sezvinogara mumutambo wekupikiswa kwakasarudzwa, maitiro ekuderera anowedzerwa uye anokurudzirwa. Apo gasi rinoshandiswa kumapuranga anopesana, iyo magetsi inogadzirwa yakawanda. Tinoshevedza ruponeso ikozvino, asi iwe muvhoti unongobatanidzwa mukunyengera kunonzi democracy. Elitaire Clingendael Minerva pawn Baudet anogona kutora nekusimudzira manzwiro emangwana pakati pevanhu. Uye chero bedzi vanhu vachimhanya mushure mutevedzeri wevanhu vanotevera, bhatiri iri kutengeswa kakawanda. Zvino kubuda kunogona kutevera; chinouya chaos. Uye kubva kune mhirizhonga iyoyo inouya urongwa hutsva uye ichanzi: "Usambofa zvakare!". Icho chiitiko chinopararira muWest West uye izvi zvingakubatsira iwe kuziva script script. Verenga zvose pamusoro peiyo script script ichi chinyorwa.
Tirikuona kugadzirira kwemhirizhonga muEurope; iyo inouya kutora neTurkey (Ordo ab Chao), kuwira kuchauya kweumambo hweAmerica uye (shure kweizvozvo, munguva yepakati pegore) hondo yechitatu yenyika yeJerusarema. Panguva ino, zvakadaro, chikamu chevanhu chinorarama mukukunda kukurumidza. Tariro yenhema yeBaudet pawn. Inguva yekuona kuburikidza nemutambo weHegelian uye kubvuma vatongi vezvematongerwo enyika kuti ivo vaani chaizvo. Iwe chete ndiwe unogona kuvabudisa pachena. Wakawa nekuda kwekuchengetedzwa kwematare pawn? Avo vanogona kubatsira kusimbisa zvinopesana munharaunda? Iwe wakawa nekuda kwekunyengera kwehurumende; inotungamirirwa nemhuri yeumambo Clingendael sangano uye Minerva.
Uyewo verenga mhinduro dziri pasi apa
Kusika kwaHenk Otten pa Forum for Democracy (Fvd) kunofanirwa kuitika
Zvishoma nezvomubatanidzwa weMarrakesh: Kutzooi!
Kuratidzwa kukuru kune Thierry Baudet iri kuuya
Zvisarudzo zveEurope uye FvD kuchengetedza net ('kubatwa nemuenzaniso wevatorwa)
Tags: Baudet, Clingendeal, democracy, Featured, Forum, FvD, institute, lang, meer, Minerva, kwete, kukunda, kukunda kutaura, nhaurwa, Thierry, kutaura, owl, nokuti
21 March 2019 pa 10: 34
Chechi chiko chete chinoramba chichitsigira sangano irizvino ...
... uye ramba uchivanza kunetseka pasi pemapapiro aamai nababa.
21 March 2019 pa 12: 10
Ndinogona kukanganisa muMinerva = Moloch, asi zvisinei, tiri pachena kutaura pamusoro pemasangano emasangano akavanzika uye Minerva owl chiratidzo chakakosha (saBaudet anozivawo). Zviri pachena kuti Baudet inobva kunhare ye Minerva neClingendael.
juanperro1979 akanyora kuti:
24 March 2019 pa 10: 14
Owl yakavanzwa pachena
21 March 2019 pa 12: 27
Iyo yega yega inoona mombe ndeiyi, uyewo kuchengetedza nekutenga kwako kwezuva nezuva.
21 March 2019 pa 16: 02
Nezvekuchinja maziso aMnu de Owl:
21 March 2019 pa 17: 36
@ De Wage muranda, chikamu chakanaka! Ndinoyeuka kuti ndakaverenga nyaya ino yapfuura pane iyi sangano pasi pepseudonym yakasiyana.
"Zviratidzo uye zviratidzo zvinotonga nyika, kwete mazwi kana mitemo."
21 March 2019 pa 12: 29
Uye pano tsanangudzo yakanaka nei ..
21 March 2019 pa 12: 41
'Kukunda kukuru Forum for Democracy kunoratidza kusagutsikana kwevhoti'
..yes and that dissatisfaction is now pretty well channeled 😀
21 March 2019 pa 12: 35
Hapana chimwezve chingawedzera, ndakanga ndapisa vhoti yangu.
Ndinoisa chimwe chekudya chakawedzerwa pamupiro uyu, VaVrijland.
21 March 2019 pa 13: 44
Mhou madiki anonzi "owl chicks"! panguva yekuitwa kwe "mhuno" Holleeder yakapa chikamu chechifukidzo kumutongi! avo vane simba rechokwadi muNetherlands, ndinotya izvozvo here?
21 March 2019 pa 13: 46
Nyaya yakanyorwa zvakanaka. Zvakanaka zvandinofunga pamusoro pazvo. Baudet ndeye 100% kushorwa kunotungamirirwa, zvichida anofanira kuisa mureza paWhite. Zvikara zvinowanzoitika. Baudet iyo iyo iyo yemunhu uyo ​​anoda kuve nemabasa eVvd's. Rutte akabatsirwa zvikuru nechiitiko ichocho muUtrecht, chaanotonhora. Iwe unokwanisa kuisa zvinhu zvose zvakasvibirira kuvashandi vehurumende, kuzadza zvikwata zvemaseri ... zvigodhi. Pazororo kuIndia asi nekadhi rechikwereti uye inshuwarisi. Zvose zvinogara zvakafanana. Hakuna mumwe wemapato ane huwandu hwakanaka uye saka anofanira 'kubatana' ne anddren. Uye saka mapato ose anonyatsopindira mumutemo. Icho ndicho chinangwa.
Freemasonry inokurudzirwa mu pachena pachena mumaziso ako. O zvakanaka, varanda havatori.
21 March 2019 pa 15: 16
Mark Twain - "Kana kuvhota kuchiita mutsauko vangarega kutitendera kuzviita."
uye ndizvo zvazviri
21 March 2019 pa 16: 35
... Handidi kuzvirova, asi zvinoratidza kuti pane kuwirirana pakati pezvinonzi kushorwa muUtrecht uye sarudzo. Izvo zvose zvinotarisirwa ..
Zvakadai sechikamu ichi chakaiswa pakati pemapurisa nevakuru veTurkey vasati vasarudzwa ... Erdogan thx! 🙂
21 March 2019 pa 16: 39
Kubvuma kugamuchira vafaro ve Freemason Masonry uye Bilderberger .. Murume akagara kurudyi rweSlabdullah ndiDe Jong uyo zvino anogona kuzvizvidza VaSekuru Vakuru, zvakare ibato duku uye chigaro chinotamba chizere
21 March 2019 pa 17: 06
Ichi chaiva 100% yaibvumirana pakati peNetherlands neTurkey. Kuparidzira kwakawanda kunoreva kuti yakarongedzerwa, yakarongwa kune veTurkey neDutchmen avo vose vakawira nokuda kwayo. Iyo makwai iri nyore nyore kutora. Vanongozvikumbira.
21 March 2019 pa 19: 31
NATO vanobatana mukupara kwemhosva, isu tichati KUCH 😀
21 March 2019 pa 16: 59
Zvakanaka, chifukidzo cheganda chinoreva avo vanowanzofungidzirwa vanobata zvigaro. Handisi kuzotsanangura izvi nekunyatsotsanangura kuti ivo ndevanaani.
21 March 2019 pa 17: 08
..holleeder haindiiti kuti ndicheke mufananidzo wakafanana uyo aibatanidzwa mune izvo zvinonzi Heineken kubatwa uye izvo zvakave zvakakonzerwa zvachose naPeter OM Regelneef de Vries mubhegi rake risina maturo rezita rimwechete uye isu tisati tavaregedza kana makwai achinhuwa ipapo tinokwevera chigadziko chakavhara kubva mubhokisi rekare pamwe chete naPetro mukaka warova.
21 March 2019 pa 18: 45
Nguva imwechete kana nyaya zvichida asi inonyatsozivikanwa kuti mapurisa akawana sei Heineken nemutyairi wake akavharwa?
Izvi hazvina kumbojeka kwandiri. Mystery?
21 March 2019 pa 17: 53
uye ndapota musaverengeka kuitika kunoitwa pasi peshoko reizvi 🙂:
21 March 2019 pa 20: 31
Rongedza hongu chirwere chaHegel ....
Mutongo uyo Baudet anoshandisa unoratidzika kuva mutsara kubva kumuGermany anonzi Hegel. Akanyora kuti: "Chiziva cheMinerva hachizotanga kusvika kumambakwedza." Hegel yaireva kuti vanhu vanongoona kana kunzwisisa chiitiko kana yava kuda kusvika. "
zvakanaka iwe unongozviona chete kana iwe uchizviona mukova
21 March 2019 pa 20: 34
Zvose zvakanyanya Baudet zvinoratidza kuva pawn uye kunyatsoziva kuti mutambo unoitwa sei.
Mukuwedzera, RTL inofanira kushandisa chirevo ichi kubata tsvakurudzo dzeGoogle dzinotenderera kuMartin Vrijland website.
21 March 2019 pa 21: 21
iyo yekuti vashandi vehurumende vese baudet vane guts kuti vataure izvi zvakarurama mukamera pamberi pemombe yekuvhota uye nheyo dzinotungamirirwa. rinoratidza zvinhu zviviri, kutanga kuti iye akafukidzwa nemumvuri wesimba uye wechipiri kuti anogutsikana kuti zvinenge 70% -80% yezvipfuwo mumusango wemhuka hauoni musango wemiti ... nokuti munyika mapofu isziso rimwe chete pamambo
21 March 2019 pa 21: 22
Pecies.. uye zvinoshamisika kuti pachava kutamba zvakare usiku huno apo uchifarira doro uye chips
21 March 2019 pa 22: 32
Ndinofanira kuzvibvuma kwaari, haasi kurega uswa huchikura zvakananga pairi
Baudet: "Tiri kuparadzwa nevanhu vanofanira kutidzivirira"
21 March 2019 pa 20: 57
Ndinonzwisisa kuti Baudet vakataura kune zvipfeko zviviri kuti ave shanduri kuSouth Holland, Wiegel naPauro Scheffer. Hapana hurumende inotarisa yakasimudza iyo iyo yakajeka. Ivo vanhu vaviri havagoni kungosiya basa. Iwe unogona kuona kuti nguva dzose inenge isina kufanana.
Ndisina tariro uye zvirokwazvo munhu wese anotarisa npo. Kuzara kwekutarisira mwoyo yedu inorova. Varanda vanotarisira chii? Kuchinja? chaizvoizvo havagoni kunyange kuita. Kungofanana nemafuta nemayonnaise evaranda. Inofanira kuramba ichifadza. Sezvandinenge ndine hanya ... juice
22 March 2019 pa 07: 29
Ndinofunga kubatana nehove yeMinerva neMoloki iri kure kwazvo.
Asi pasinei nekuti Baudet inonyatsogutsa, pane, mune maonero angu, chikonzero chikuru chikuru chekuti vakuru vanoda Baudet.
Uye izvi ndezvokukwezva vanhu kuvhoti dzekuvhota.
Vakuru vakuru vakaita sekuti vanhu vazoona kuti kuvhota hakuiti kuti tinyatsonzwisisa zvachose nokuti ivo vachiri kuiswa pasi.
Kana vanhu vachinge vachinge vachinge vachinge vachinge vachinge vachinge vachinge vatora 'mavhoti', simba ravo rinotanga kuparara.
Kuti vanhu vaende kumapurisa, vezvematongerwe enyika vanofanira kumira izvo vanhu vanoda kunzwa.
Uye pakati pevanhu vanosimudza munoda Thierry Baudet.
Zvechokwadi, vakuru vacho havatsvaki vezvematongerwe enyika kuti vaise pachena mamiriro avo emamiriro ekunze uye vanomira kutamira kune dzimwe nyika, asi zvingave (kwechinguva) zvibayiro.
Baudet anoti anoda kudzorera chivimbo mune zvematongerwo enyika, iye zvino akabudirira chaizvo.
Uye ndizvo chaizvo izvo zvinokosha (nokuda kwevakuru).
22 March 2019 pa 07: 31
"Hurumende yeHurumende yakataura mumashoko ayo gore negore kuti kuvimba mune zvematongerwe enyika uye mapato ezvematongerwe enyika ari kukanganisa uye kushanda kuri kuparadza demokarasi."
Ndakaverenga munyaya yeVolkskrant kubva ku2017.
22 March 2019 pa 09: 28
Chinangwa chacho ndechekuti unongotora pahutano pasi pezwi rokuti Moloch uye iwe unouya pane vhidhiyo uye maonero atinotsanangura.
22 March 2019 pa 13: 25
Kutangira kweC20 March chiitiko
Dzvanya pahubatanidza, nharo huru muMedia mu2018 patafura ye RTLshow
Pano pane mazano mashomanana asi zvakare muchiChirungu
22 March 2019 pa 17: 59
@Martin, unofanira kuverenga iyi AD. Inoratidzika semashoko pamusoro pechinyorwa chino incl zvinyorwa .. Kuora mwoyo
Chifananidzo chechizive semudzidzi ave akachengetwa kubva ipapo. Hazvisi pasina kuti Mr. de Uil muTfeltjeskrant ndiye anonyatsoziva nhoroondo.
Izvo Hegel - uyewo Baudet-zvaireva: njere inongouya chete apo migumisiro yechinhu chinonyatsojeka. Inotarisa sezvakaita Cruyffian 'iwe uchaona chete kana iwe uchiona'. Saka Baudet inoreva, pakati pezvimwe zvinhu, kune 'kupenga kwemamiriro okunze', zviyero zvaanotenda zvinodhura mari yakawandisa, asi mumaziso ake hazvina zvishoma.
Nyaya inosuruvarisa ...
22 March 2019 pa 18: 18
Zvakananga, ndakamuona usiku hwekupedzisira, asi ndisina nguva yekushanda pawebsite yangu zvakare.
Vanoverenga pamwe chete uye vanoona kuti zviuru makumi ezviuru zvevanhu zvinoguma pawebsite yangu nokuti vanoenda kutsvaga chirevo ichocho naBaudet, saka vanofanira kundikanda mumigumisiro yeGoogle.
Uyu mutambo mukuru uri kutambidzwa uye ivo vanonyatsotya kuti vanhu vachabva vazomuka. Ndinozviita ini ndoga uye vhidhiyo vane mamiriyoni (kana vasingazi mabhiriyoni) uye vane mavara ehurumende anodzora uye vane boka rose rezvemagariro evanhu uye vane musungo wavo ku Inoffizieller Mitarbeiter uye vane AIVD iyo inoyera uye inoziva (uye inodzora zvose) .. uye nezvimwe zvakadaro!
22 March 2019 pa 19: 51
IMedia / Macht inopa Baudet pamwe chete
Mharidzo inongotaura 1! chithunzi notabene paMediapark ane chiuru chemamera makamera uye makamera ane chiuru pane imwe chete yemapaki pepa, chete 1 chithunzi kana maviri chero zvakadaro
22 March 2019 pa 21: 32
Pim Fortuyn akaurayiwa pazera remakore gumi nemana pa 6 / 5 ye6: 05 yakagumburwa ne5 mabhomba, 6 shells dzakawanikwa pedyo naye uye pane chimwe chinhu pamusoro pe5 kubva kumapurisa e6 pakarepo.
6 + 5 = 11 uye 6 × 5 = 30
Mukuwedzera kune vane gumi nomumwe chete tinosangana kakawanda # nhamba yeupenzi # # extremelowfrequenty # # dualism # # ELeven #
izvi zvinoreva kutora nguva yakareba yaro uye vakaita saizvozvo. Nzira imwechete iyo inoshandiswa kupa vanhu (ert) zvavanoda zvakanyanya.
« Vakafa vekurwiswa muUtrecht vanoratidza kuti haikwanisi kuva PsyOp?
Kuratidzwa kukuru kune Thierry Baudet iri kuuya »
Total Visits: 11.677.180